Maamulka Jubbaland oo sheegay in qiimeyn ku sameynayaan ammaanka Muqdisho -
Home News Maamulka Jubbaland oo sheegay in qiimeyn ku sameynayaan ammaanka Muqdisho
Maamulka Jubbaland oo sheegay in qiimeyn ku sameynayaan ammaanka Muqdisho
Maamulka Jubbaland ayaa sheegay in ay qiimeyn ku sameyn doonaan xaalada amni ee magaalad Muqdisho oo lagu wado in uu ka dhaco Shirka Madaxda Dowladda Federaalka, Dowlad Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir oo looga hadlayo Arrimaha Doorashooyinka Dalka.
Madaxweyne ku xigeenka 1-aad ee DG Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo u warmayay laanta afka soomaaliga ee BBC ayaa sheegay in xaalad aan wanaagsaneen ay kasoo korortay Muqdisho.
“Mar haddii aysan is fahamsaneen dadkii wax wada lahaa waa in aan ka fiirsanaa tagista Muqdisho & ka qaybgalka Shirka, Ciidamadii & Siyaasadiinta haddiiba ay kala qaybsameen waa in aan marwaliba ka fiirsanaa tallaabooyinka aan qaadeyno oo ku xiran mowqifkeena” ayuu yiri Maxamuud Sayid Aadan.
Maxamuud Sayid Aadan Madaxweyne ku xigeenka Jubbaland ayaa xusay in maamulka Jubbaland uu si dhow ula socdo xalada amni ee caasimada dalka balse ay ka go’an tahay in Jubbaland ay ka qeybgasho shirarka lagu raadinayo mustaqbalka dalka.
Maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland ayaa ka hadlay shaqaaqadii shalay ka dhacday Muqdisho iyadoo aysan weli war rasmi ah ka soo bixin maamulada Galmudug,Hirshabelle iyo Koofurgalbeed.
Previous articleEndurance radiates back amazing images of Mars landing
Next articleXoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay oo walaac ka muujiyay shaqaaqooyinka ka dhacay Muqdisho